Kangton - Banyere Anyị - Kangton Industry, Inc.
Ụlọ ọrụ Kangton, Inc. bụ onye na -eweta ihe ngwọta dị elu nke ụlọ ahịa, ọnụ ụzọ na kabinet.
Kemgbe 2004, anyị na -ekerịta ezigbo ahịa n'ụwa niile, ọkachasị na North America, Europe, Australia na South America.
Ngwongwo Vinyl azụmaahịa, Ntọala SPC siri ike, Ntọala nke osisi siri ike, osisi SPC flooring, Laminate Flooring, Bamboo Flooring, na WPC Decking.
Ọnụ ụzọ mbata, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkwa ọkụ, ọnụ ụzọ mbata siri ike
Ogwe ụlọ kichin, wodrobu, na ihe efu
Site na CE, Floorscore, Greengard, Soncap, asambodo FSC na nnwale nke Intertek na SGS.
Ngwaahịa anyị bụ ọkwa dị oke mma, nke nnukwu akara, ezigbo ụlọ nabatara, onye nrụpụta na ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ụwa niile.Ị nwere ike ịchọta ihe anyị na ọrụ dị iche iche na North America, Europe, Australia, South East Asia, South America, Mi- East na Africa.
Kangton họrọ ndị mmekọ mmekọrịta anyị nwere ọkọlọtọ mba ụwa. Anyị na -ejikwa ịdị mma na -enye nyocha QC n'oge mmepụta na tupu ibugo. Ndị ahịa anyị niile ga -enweta akụkọ QC nwere foto zuru ezu maka mbupu ọ bụla. Anyị na -ahụ maka ọnụ ahịa asọmpi siri ike, ogo kachasị elu na ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ.
Ọrụ DDP dị, gụnyere mbupu, ụtụ isi, ọrụ, ụgwọ ụlọ. Ebumnuche anyị bụ imepụta ndị ahịa anyị uru ọzọ wee zụlite ọnụ.
Ihe ọ bụla ịchọrọ maka ọnụ ụzọ, ala ma ọ bụ kabinet, anyị kwenyere na Kangton ga -enye gị azịza ọkachamara kacha mma.
Gịnị kpatara Kangton?
Na Kangton, ị ga -ahụ ọnụ ụzọ azụmaahịa dị elu, ala na kabinet ka o kwekọọ n'ụlọ gị nke ọma.
Na Kangton, ị ga -echekwa ọnụ ahịa na oge kacha mkpa maka mkpa gị.
Na Kangton, ị ga -enweta azịza ọkachamara ọkachamara na ọrụ dị mma.
Kemgbe 2004, Kangton Industry, Inc. banyere ubi ihe owuwu site na nkwado nke ISO, asambodo CE. Site na nkwalite siri ike na B2B na ihe ngosi, Kangton maara nke ọma ngwa ngwa site n'aka ndị na -azụ ahịa mba ụwa, ndị mmepe na ụlọ ọrụ ala na ụlọ, ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na -eweta ihe nrụpụta ọrụ kachasị ike na nke na -eduga na China.
Kangton na-enye oke zuru oke, na-enye ọtụtụ nhọrọ dị iche iche dabara na ụtọ niile, ebe obibi ma ọ bụ azụmaahịa, n'ime ma ọ bụ mpụga, ọdịnala ma ọ bụ nke ọgbara ọhụrụ, kpochapụwo ma ọ bụ fasion, dị mfe ma ọ bụ pụrụ iche. A na -anabatakwa OEM. Inwe ụlọ pụrụ iche abụghị nrọ na Kangton.
Ahịrị mmepụta klaasị mbụ na ngwa sitere na Germany na Japan, mee Kangton Door, Floor na Cabinet ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu. Iwu njikwa njikwa siri ike maka usoro ọ bụla n'oge mmepụta na -ahụ na ogo kangton bụ nke atọ na China. Dịka ọmụmaatụ, a na-ekewa osisi anyị wepụtara ka ọ bụrụ ọkwa A, B, C, D nke nwere mmiri kpụkọrọ akpụkọ 8-10%. Ndị otu QC nọọrọ onwe ha na -ebubata ngwongwo niile mbupu ọ bụla tupu izipu. Kangton na -enye ngwaahịa n'ezie nke ga -eju gị afọ.
Ịbụ ndị na -eketa ụlọ ọrụ site na itinye ego bụ ụzọ Kangton nwere ike isi nweta nhota dị ala site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Mbupu Kangton na -ebupụ karịa ọnụ ụzọ PC 120,000 kwa afọ, nnukwu ego na -eme ka Kangton nwee ọnụ ahịa kacha mma. Na mgbakwunye, iji nyere ndị ahịa aka inweta uru karịa ma nwee asọmpi asọmpi n'ahịa ha, Kangton na -edobe oke uru dị ala. Ihe atọ a na -eme ka ị kwụọ ụgwọ dị ọnụ ala site na iso Kangton rụọ ọrụ.
Họrọ Kangton pụtara na ị na -ahọrọ ndị otu ọrụ aka ọrụ ka ọ rụọ ọrụ maka gị. Ndị injinia anyị nọ n'ọhịa ihe ịchọ mma ihe karịrị afọ 17 wee nwee ike ịnye gị nhọrọ kachasị na nhazi, imewe na nrụnye.
Eresịla Kangton nye mba ụwa niile gụnyere USA, Canada, European Union, Australia,
Japan wdg, nke na -enye ndị otu ahịa Kangton ahụmịhe na ihe ọmụma zuru oke maka ahịa chọrọ.
Nabata ma họrọ Kangton
anyị nwere ike wulite ọdịnihu dị mma.